Thwebula Unity 2.4.2 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Unity
Unity – a isofthiwe ukuthuthukisa 2D and 3D imidlalo. Isofthiwe kwenza ukudala imidlalo kanye izicelo okuyinto osekelwa amasistimu Windows, OS X, Android, iOS, Linux futhi aduduze futhi kugembula Wii, PlayStation 3 no Xbox 360. The amathuba main Unity zihlanganisa: ukusekela izithunzi ashukumisayo kanye kaka landscape umhleli, nokumodela okuzenzakalelayo, ukuhlolwa kwe-game in umhleli njll Ukusebenzisa eyakhelwe-in module isofthiwe kukuvumela ukudala ezihlukahlukene kwezicelo internet. Unity iqukethe amathuluzi for development ngokuhlanganyela kanye ezenezelwe ahlukahlukene ukuze ukunwetshwa software amathuba.
Support for imidlalo owadalwa okusebenza systems ezahlukene
Ukuthuthukiswa kwezicelo internet
Support for iDirectX and OpenGL
Kungenzeka yentuthuko ngokuhlanganyela
Amazwana ku Unity
Unity software ehlobene
Ithuluzi eliphelele ekuthuthukisweni komdlalo kwezinhlelo ezihlukile zokusebenza. Isoftware inesethi yemiphumela yokuqhafaza nemisindo ukufeza ukwakheka okuhle kakhulu komdlalo.
Lona umhlaziyi wekhodi yomthombo ngeqoqo lamathuluzi ukuhlela izakhi ezihlukahlukene zekhodi futhi athuthukise amakhono ukubhala ngaphandle kwamaphutha.